रेडबुल शक्तिबर्धक नभई मन्द विष, यी हुन् रेडबुलबाट हुने गम्भीर र प्राणघातक समस्या
काठमाडौं । युवापुस्ता र खेलाडीले रेडबुललाई शक्तिवद्र्धक पेय पदार्थका रूपमा बढी प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
युरोप र अमेरिकाका अधिकांश मुलुकले रेडबुलको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असरका बारेमा आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराउँदै आएका छन्।
तर नेपाललगायत अल्प विकसित र विकासशील मुलुकमा भने यसले स्वास्थ्यमा पार्ने असरका बारेमा निकै कम मात्र चर्चा हुने गरेको छ।
इनर्जी ड्रिंक्सका रूपमा रेडबुल बढी प्रयोग गर्नेहरूमा युवापुस्ता र खेलाडीहरू पर्दछन्। यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ।
केही समयका लागि थकान मेटिएको अनुभव भए पनि यसले कालान्तरमा अनिद्रा, रक्तचाप बढाउने, चिन्ता बढ्ने, ह्दयाघात, टाउको र छाती दुख्ने समस्या, पखाला लाग्ने, छिनछिनमा पिसाब लाग्ने समस्या, तौल बढ्ने, मिर्गौलामा समस्या देखापर्नेलगायतका समस्या देखिने गरेका छन्।
तर त्यहाँको सरकारले ४ वर्षअघिमात्र उक्त निर्णयमाथि फुकुवा गर्दै औषधि पसलबाट मात्र खरिद बिक्री गर्न मिल्ने प्रावधान राखेको छ।
त्यसै गरी कुबेतमा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिले रेडबुल किन्न पाउँदैनन्। स्वीडेनमा रेडबुल खाएर तीन जनाको तीन जनाको मृत्यु भएको विषयमा अहिले पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ।
मृत्यु भएका ती व्यक्तिमध्ये २ जनाले रक्सीसँग रेडबुल मिसाएर खाएका कारण त्यसले रक्तसञ्चार बन्द भएको ठानिएको छ।
यसरी मुटुको गति बढ्दा खेलाडीहरूमा तत्काल हृदयाघात नै हुन सक्ने निष्कर्षमा बेलायतमा गरिएको अनुसन्धानले देखाएको हो। आयरल्यान्डका १८ वर्षीय बास्केटबल खेलाडी रुज कोनीको बाल्केटबल खेल्दा खेल्दै हर्ट अट्याकका कारण मृत्यु भयो।
उनको मृत्युका पछाडि बढी मात्रामा रेडबुल पिएर कोर्टमा उत्रनुलाई कारण मानिएको छ। त्यसै गरी, अमेरिकाका ३३ वर्षीय कोरी टेरीको पनि बास्केट खेल्ने क्रममा मृत्यु भएपछि उनको परिवारले रेडबुलसँग १८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति माग गरेको घटना सेलाउन पाएको छैन।
शक्तिवद्र्धक पेय पदार्थका रूपमा खेलाडी तथा युवाहरू बढी पिउने गर्छन्। तर यसले पार्ने असरका विषयमा निकै कम व्यक्ति मात्र जानकार छन्।
प्रकाशित : आइतबार, जेठ २७, २०७५०६:५२
बढ्दै छ सम्बन्ध विच्छेद ? यस्ता छन् मुख्य ७ कारण
प्रधानमन्त्रीको भिडियो सन्देश : भ्रष्टाचारको दिन गए(भिडियो सहित)
आक्रामक बन्दै सरकार, ट्रेड युनियन खारेजीको तयारी
सरकारले तोक्यो विरोध प्रदर्शन गर्ने ठाउँ, अरु ठाउँमा गरे कारबाही
धादिङमा श्रीमानको मृत्युपछि श्रीमतीले कुरीति तोड्दै लगाईन् रातो लुगा!
शसस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ संरचना लागू, प्रत्येक प्रदेशमा बाहिनी स्थापना गरिने